नेपाललाई हजारौं वर्ष केले टिकायो - Interviews - Bipin Adhikari
नेपाललाई हजारौं वर्ष केले टिकायो
कोसेली, कान्तिपुर दैनिक
दयारामभक्त माथेमाको ‘अनुभव र अनुभूति’, रेवतीरमण खनालको ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ गोपाल खनालको ‘भूराजनीति’, भोजराज घिमिरेको ‘मोडहरूमा म’, कुलचन्द्र गौतमको ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ र एन्ड्रयु डफको ‘सिक्किम : रेक्विम फर अ हिमालयन किङडम’ मैले पछिल्लो समय पढेका पुस्तकहरू हुन् । यी सबै सूचनामूलक छन् । माथेमाले पुस्तकमा १९९७ देखि २०१६ सम्म र त्यसपछिको समयबारे आफ्नो हिसाबले चर्चा गरेका छन् । यो किताबले नेपालको संवेदनशील समयका बारेमा राजा त्रिभुवनको दृष्टिकोण दिन्छ । लेखकले राजाहरूबारे इमानदार प्रस्तुति दिएका छन् । सिक्किमसम्बन्धी किताब धेरै जानकारीमूलक छ । सिक्किम विलयपछि आएको सुनन्ददत्त रायको ‘स्म्यास एन्ड ग्रयाब’ भन्दा यो पुस्तक निकै राम्रो छ । डफको पुस्तकमा भारतको दृष्टिकोण मात्र छैन । भारतले कसरी कदम चाल्यो भन्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा सिक्किम विलय कसरी भयो भन्ने चर्चा छ यसमा ।
मेरो अध्ययनको अर्को विषय बीपी हो । उनीसम्बन्धी भेटेजति पढ्छु । उनीबारे आउने राम्रा–नराम्रा जति पनि दृष्टिकोण छन्, ती सबै जान्न चाहन्छु । अनि, त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण राख्न मन पर्छ मलाई । मेरा दृष्टिमा बीपी नेपालको पुनर्जागरणका प्रतीक हुन् । मैले बीपीको जीवन अनि उनको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय मेलमिलापसम्बन्धी धारणाबाट निकै सिकेको छु । सार्वजनिक नीति र सुरक्षाको विषयमा पनि मेरो चासो छ । पछिल्लो समय चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ बारे भेटेजति सामग्री पढिरहेको छु । वर्तमान नेपालको चुनौती, नेपाल–भारतसम्बन्ध र नेपाल–चीन सम्बन्ध बताउने पुस्तक पनि मेरो छनोटमा पर्छन् ।
अब ‘लक्जरी रिडिङ’ भन्दा पनि यसको प्रयोग पनि होस् भन्ने चाहन्छु । ‘वान बेल्ट एन्ड वान रोड’ लाई मैले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको त्यही भएर हो । नेपाल सरकारले यसको सन्दर्भमा कतै गल्ती गरिहाल्यो भने झ्याप्प समाउन सकियोस् भनेर । किनकि नेपालमा त्यसको विशेषज्ञ छैनन् । हेन्री किसिन्जरको ‘अन चाइना’ मलाई मन परेको पुस्तकमध्ये पर्छ । चीनबारे मैले निकै किताब पढें तर यो नपढेको भए मेरो चीन बुझाइ कमजोर नै हुन्थ्यो । तर यसमा नेपालबारे उल्लेखै छैन । किनेकै दिन इन्डेक्समा नेपाल खोजेको थिएँ तर भेटिनँ । नक्सामा भने रहेछ, त्यतिले नै चित्त बुझाएँ । त्यसबारे समीक्षा नै लेखें, ‘छिमेकी मुलुक नेपाल चीनको महत्त्वपूर्ण विषय हो, ऐतिहासिक कालदेखि नै । तर यसबारे लेखिएन ।’ सुखद संयोग किसिन्जरको अर्को पुस्तकमा हाम्रो देशबारे एक अनुच्छेद परेको छ— नेपाल कसरी आफ्नो डिप्लोमेसीका बलमा टिकेको छ भनेर ।
नेपालको इतिहास या अंग्रेजले आफ्नो ‘कोलोनियल पावर’ का दृष्टिकोणले लेखे, या भारतीयले लेखे, नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने हेतुले । अन्य पश्चिमाहरूले पर्यटक भएर लेखे । कोही तीर्थयात्री, कोही जासुस र कोही चिकित्सक भएर आउँदा लेखे । अनि हाम्रा इतिहासकारहरूले जति पनि लेखे, सबै आफ्नो हिसाबले लेखे । बाबुराम आचार्य जो ‘लिडिग हिस्टोरियन’ हुन्, उनले आफ्ना स्रोतका सूचनाहरूका आधारमा लेखे । त्यसमा अरूले के भन्छन्, त्यसको तुलनात्मक महत्त्व कति छ भन्ने आधारमा उनले हेरेजस्तो लाग्दैन । तर, महेशचन्द्र रेग्मीले लेखेको भूमि र प्रशासनसम्बन्धी पुस्तक बेजोड छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेर र त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल के हो भन्ने चिनेर लेखे उनले । आजसम्म जग्गाजमिनसम्बन्धी नेपालमा जे–जे प्रकाशित छन्, ती सबैमा कि उनकै सन्दर्भ दिएर लेखिएको छ कि चोरेर । रेग्मीले जसरी पुस्तक लेखियो भने झूटा कुरा आउँदैन । अहिले तराईबारे जे लेखनी आइरहेका छन्, ती सही होइनन्् । पहिचानको राजनीतिले बेहाल गरिदिएको छ देशलाई । देशलाई ‘सस्टेन’ गर्ने हजारांै वर्षका राजनीतिक आधारहरू के थिए भनेर पुस्तक लेखिएका छैनन् । यस्ता कुराहरू समावेश पुस्तकको खाँचो छ ।
लियो ओ रोजले नेपाललाई एसियाली सन्दर्भमा एउटा ‘टेस्ट केस’ मा रूपमा लेखेका हुन् । यहाँ बसी अध्ययन गरेर विश्वसनीय स्रोतका आधारमा लेखेका हुन् । अरूजस्तो दुई चार दिन पाहुना भएर लेखेका होइनन् । त्यस्तै फादर स्टिलर पनि विश्वसनीय लेखक हुन् । यसको मतलब यो होइन कि ‘फ्लाई बाई नाइट कन्सल्ट्यान्ट’ ले लेखेका कुरालाई ‘डिस्क्रेडिट’ गरिहाल्नुपर्छ । खासमा उनीहरूले दिएको ‘डेटा’ लाई लिने हो तर धारणा अपनाउने होइन । जस्तो भनूँ— पृथ्वीनारायाण शाहले एकीकरणको लडाइँ कसरी लडे भन्ने ऐतिहासिक ग्रन्थ अभाव छ । कसैले लेखेको छैन । फादर रुबाटोले जे लेखे, त्यो किताब पनि होइन एउटा संस्मरणात्मक निबन्ध हो, बेतियाको चर्चलाई बुझाएको । पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेको एउटा पीडितले रिसाएर लेखेको किताब कस्तो हुन्छ ? उनले जथाभावी लेखेका छन् । दुर्भाग्य π पश्चिमाहरूले यसलाई विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा लिइदिए । २४ घण्टाभित्र देश छोड भनेर लगारिएकाले कसरी निष्पक्ष लेख्न सक्छ ? म उनले भनेको कुरालाई ‘डिस्रिगार्ड’ गर्दिनँ तर, त्यसलाई केवल ‘डेटा’ का रूपमा मात्र लिन्छु । उनले आफूलाई पृथ्वीनारायणले खेदेको मात्र देखे । मैले त पृथ्वीनारायणलाई दसवटा रूपबाट हेरेको छु । पृथ्वी नारायणलाई मुल्यांकन गर्दा ‘होलिस्टिक’ हुनुपर्छ । लडाइँमा पनि सिद्धान्त हुन्छ । ठूलो ‘कज’ चाहिन्छ । बिना ‘गुड कज’ खुकुरी बोकेकै भरमा नेपाल एकीकरण भएको होइन । खुकुरी बोक्ने शासकले पनि जनताको वैद्यता खोज्छ । यस्ता कुरा इतिहासकारले लेखेनन् भनेर विश्लेषकले जे पनि ग्रहण गर्न मिल्दैन ।
1.‘पुरानो मुलुकी ऐन’ (विसं १९१०)
2. योगी नरहरिनाथको ‘पृथ्वीनारयण शाहका दिव्य उपदेश’
3. बाबुराम आचार्यको ‘श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारयण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ (२०२४)
4. महेशचन्द्र रेग्मीको ‘अ स्टडी इन नेपाली इकोनोमिक हिस्ट्री’
5. भुवनलाल जोशी र लियो इ रोजको ‘डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स् इन नेपाल’
6. लियो इ रोज र जे टी स्कल्जको ‘नेपाल, प्रोफाइल अफ अ हिमालयन किङडम’
7. लुडविङ एफ स्टिलरको ‘द साइलेन्ट क्राई : द पिपल अफ नेपाल’
8. एम एस स्लुसेरको ‘नेपाल मण्डला : अ कल्चरल स्टडी अफ द काठमान्डु भ्याली’
9. आर मित्रको ‘द संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर अफ नेपाल’
10. ए होफरको ‘द कास्ट हाइरार्की एन्ड द स्टेट इन नेपाल’
11. बट्रान्ड रसेलको ‘अनपपुलर एसेज’
12. लुइस फिसरको ‘द लाइफ अफ महात्मा गान्धी’
13. बर्नार्ड बेलिनको ‘द इडियोलोजिकल अरिजिन्स अफ अमेरिकन रिभोलुसन’
14. नान्सी फ्राइडेको ‘माई मदर माइसेल्फ’
15. म्याक्सिम गोर्कीको ‘द मदर